Laser umbhalo Machine, Optical Fibre Laser Machine Supplier - Vomeiya
nokukrola Laser Nonmetal kwaye umatshini ukusika
Yasekwa ngonyaka ka-kuka-2014, le nkampani ezizodwa ekuveliseni iinkcukacha ezahlukeneyo bomashini ngentlabo laser, Umatshini ukumakisha enombala ifayibha laser, enombala ifayibha laser ukusika umatshini. Le nkampani iye imali eninzi ekuphuhliseni imigca ezingoomahambehlala esizisebenzelayo koomatshini laser. Products zisetyenziswa ikakhulu kumazwe angaphandle.
imveliso nganye wenziwe ngocoselelo, oko kuya kukwenza ube kwaneliswa. iimveliso zethu kwinkqubo yemveliso baye ...
Namhlanje, Thina ngothando olukhulu nokunyaniseka ukuzalisekisa phambili iimfuno zabathengi bethu jikelele 'nomgangatho elungileyo ...
Ngeteknoloji nje undoqo, ukuphuhlisa nokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokwe ...
2513 Co_2 laser ukusika machine
Split Fiber Laser kukhunjulwe Machine
IKhabhinethi Fiber Laser kukhunjulwe Machine
1610-1810 lweehagu oluzenzekelayo machine laser ukusika